मलमा धोका दिने शारदाप्रसादको हातमा अझै दुई अर्बका ठेक्का – HostKhabar ::
मलमा धोका दिने शारदाप्रसादको हातमा अझै दुई अर्बका ठेक्का
काठमाडौँ : २०७५ जेठको कुरा हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा काम नगर्ने १ सय ठूला ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने मुडमा थिए । उनको सूचीमा पर्नेमध्ये थिए, शारदाप्रसाद अधिकारी ।
काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न ठेक्का पार्ने, मोबिलाइजेसन खर्च लिने, अनि वर्षौंं झुलाइरहने बानी थियो अधिकारीको । त्यसैले चाहे एकै दिन मात्रै भए पनि किन नहोस्, उनलाई गिरफ्तार गर्न चाहन्थे थापा ।
तर किन पछि हट्न पुगे थापा ? अनुमान गर्न एकदमै सजिलो छ । गृहमन्त्री सचिवालयका एक सदस्य अहिले पनि भन्छन्, ‘त्यतिबेला उनले अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण ब्याक हुनुपरेको थियो ।’
त्यसै बेलातिर गृहमन्त्रीको प्रयास थियो, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट सिध्याउने । फेरि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै दबाब आयो । उनले थापालाई निवासमा बोलाएर अभियान स्थगित गर्न दबाब दिए । थापाले प्रतिवाद गर्न सकेनन् । गाल टार्न गृह मन्त्रालयले जिल्लाका ससाना ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरेजस्तो त गर्‍यो । तर ठूलालाई नछोई टार्‍यो ।
सरकारभन्दा माथिल्लो ठाउँ कहीँ छ भने त्यहाँसम्मै पहुँच बनाएका यी अधिकारीलाई सरकारी कारबाहीबाट डामिन अरु दुई वर्ष लाग्यो । २१ भदौमा कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री घनश्याम भुषालले अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको २५ हजार मेट्रिकटन मल खरिदसम्बन्धी ठेक्का रद्द गराए । यो अधिकारीका लागि पहिलो धक्का थियो । तर, याद गरौँ । उनका हातमा अझै २ अर्बभन्दा बढी रकमका दुई ठेक्का छन्, त्यो पनि मल खरिदसम्बन्धी नै ।
माघ २०७६ को सम्झौताअनुसार १० साउन २०७७ भित्र पहिलो लटको मल खरिद नै गर्न नसकेको थाहा पाउँदापाउँदै शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले त्यसको ठीक २३ दिनपहिला झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दियो ।
१८ असार २०७७ मा ३० हजार मेट्रिकटन खरिदका लागि प्रतिमेट्रिकटन ३११।५० अमेरिकी डलरमा हात पारेको थियो । त्यसको ठीक १६ दिनपछि अर्को ठेक्का पायो २५ हजार मेट्रिकटनको र त्यो ठेक्कामा भने प्रतिमेट्रिक टन ३२१।९९ अमेरिकी डलर कबोल गरिएको छ ।
लिमिटेडका अनुसार दुुई चरणको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५५ हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का शैलुङले पाएको हो । माघ २०७६ मा सम्झौता भएको २५ हजार मेट्रिकटन मल खरिदसम्म गर्न नसकेको जानकारी दोस्रो र तेस्रो चरणका सम्झौता गर्दासम्म लिमिटेडलाई थाहा नभएको होइन । तर, उसले दोस्रो र तेस्रो ठेक्का पनि अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई जिम्मा दिनुमा राजनीतिक आडभरोसाले काम गरेको थियो ।
लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्थाअनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणको ठेक्का पाएको हो ।
पोखरेल भन्छन्, ‘टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेर आएका हुन् तर बाहिर हल्ला गरेजस्तो राजनीतिक दबाबचाहिँ होइन् ।’ अघिल्लो लटको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भनेर शैलुङसँगको ठेक्का रद्द मात्र होइन, कालो सूचीमा राख्ने तयारीसमेत भइरहँदा पछिल्ला दुई ठेक्का के हुन्छन् रु कम्पनीका पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसबारे थप छलफल नै भएको छैन ।’
पछिल्ला सम्झौताअनुसार १ सय ७ दिनभित्र मल ल्याउनुपर्छ । ‘२५ हजार मेट्रिकटन मल ७२ दिनमा ल्याउन नसकेको ठेकेदारले ५५ हजार मेट्रिकटन कसरी १०७ दिनमा ल्याउन सक्ला ?,’ कृषि सामाग्री कम्पनीकै कर्मचारी आंशका गर्छन् ।
सम्झौताअनुसार रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीसँगको सम्झौता २१ भदौमा रद्द गराएका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालले असफल ठेकेदारको अर्को ठेक्का पनि रद्द गराउँछन सक्लान् त ? अहिले मन्त्रालयमै प्रश्न छ । यस अर्थमा भुषालको अर्को चक्रब्यूह बाँकी नै छ ।
सडकको अनुहार उस्तै
सस्तोमा टेण्डर हाल्ने अनि राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेक्का लिने अधिकारीको चरित्र नै ठेक्का पार्ने मोबिलाइजेसन खर्च लिने अनि काम अलपत्र छाड्ने बनेको छ । जस्तो, करिब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको भक्तपुर—नगरकोटको साढे १५ किमि सडकखण्ड निर्माणले ७ वर्ष बिताइसक्यो ।
२०६९/७० मा ठेक्का लिएका अधिकारीले समयमा काम गरिदिएको भए २०७२/७३ मा सकिने थियो । तर, आजसम्म त्यो सडकखण्ड पिच हुन सकेको छैन । उल्टै स्थानीयले काम नगर्ने ठेकेदार भनेर अधिकारीको फोटो भक्तपुर चल्ने सार्वजनिक यातायात र पोलपोल टाँसेर बदनामी ब्यहोर्दा पनि अधिकारीले लाज मानेका छैनन् ।
भक्तपुरको सडकखण्ड जस्तो अवस्थामा छ, त्योभन्दा बिजोग बालाजु—ककनी सडकखण्डको छ । अधिकारीको पुर्ख्यौली घर सूर्यगढी जाने मार्ग पनि यही हो । तर, २७ करोड ४७ लाखमा सडक विस्तार र पिचको ठेक्का लिएका अधिकारीले सडक भत्काएर त्यत्तिकै छोडेका छन्, जसले गर्दा नुवाकोटका स्थानीय बालाजु—रानीपौवा—त्रिशूलीको बाटो छोडेर नागढुंगा—गल्छीको बाटो प्रयोग गर्न विवश छन् ।
आफ्नै जिल्लामा गतिलो काम गर्न नसकेका अधिकारीको यो हेलचेक्र्याइँ पहिलो भने होइन । ९ वर्ष पहिला नुवाकोटको विदुर—चोगटेसम्मको सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्कामा पनि यस्तै लापरबाही भएको थियो । आफ्नै जिल्लामा काम लिएका अधिकारीले १० किमि लामो त्यो सडकखण्डमा यति निम्नस्तरको ग्राभेल गरे कि उनले आफ्नै गाउँलेका अघि शीर झुकाउनुपरेको थियो । त्यसपछिको अर्को बालाजु—रानीपौवा—त्रिशूली खण्ड पनि त्यही हालतमा छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका थुप्रै सडकमा अधिकारीको हालीमुहाली छ । थानकोट—नागढुंगा सडकखण्ड होस् वा ढोलाहिटी—सुनाकोठी—चापागाउँ सडकखण्ड किन नहोस्, ललितपुरमा मात्रै पाँचवटा सडक निर्माणको ठेक्का अधिकारीको हातमा छ । जहाँ अधिकारीले हात हालेका छन्, त्यही सडकको काम समयमा सम्पन्न हुनु त परको कुरा, भइहालेमा पनि गुणस्तरमा एकदम कमजोर छन् । तर, उनको कम्पनीमाथि कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको काम गतिलो छैन र अलपत्र छन् भन्ने थाहा नभएको होइन । उनले पटकपटक छलफल पनि गरेका छन् । तर, परिस्थिति सुधार भएको छैन । नेम्वाङ शिलापत्रसँग भन्छन्, ुठेक्का पाएका सडक अलपत्र छन् भन्ने जानकारी छ, कतिपय क्षेत्रमा काम ढिला भयो भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि गुनासो लिएर आएका पनि थिए ।ु तर नेम्वाङ कारबाही गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
स्रोतका अनुसार नेम्वाङले स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर, अधिकारीले अनेकन बाध्यता सुनाएर अन्ततः आर्थिक संकटको भावुक कथा सुनाएर आलटाल गरिदिए । तर, पछिल्ला दिनमा नतिजामुखी सुधार थालेर प्रशंसा पाइरहेका मन्त्री नेम्वाङ उनको कुरामा किन अलमलिन पुगे त रु यसबारे भने प्रष्ट खुल्न चाहेनन् ।
अधिकारीको ‘अग्रगामी छलाङ’
अस्वाभाविक र अकस्मात् उदाएका शारदाप्रसाद अधिकारी पछिल्ला दिनमा ठेकेदारको रूपमा जति परिचित छन्, त्योभन्दा बढ्ता प्रचण्डको घरबेटीका रुपमा छाएका छन् । अर्थात् ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक शक्तिको भरोसाले उदाएका अधिकारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको बास मिलाइदिने हैसियतमा पुगे । त्यसको लहरो खोतल्नचाहिँ झन्डै दुई दशकअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४४ सालमा काठमाडौं ओर्लिएका अधिकारी गुजाराकै दौडधुपमा थिए, त्यही मेसोमा एउटा कम्युप्टर इन्स्टिच्युटमा काम गरेका अधिकारीले २०५१ पछि आफैँले इन्स्टिच्युट र कम्युटर तालिम केन्द्र सञ्चालन गरे, भोटाहिटीमा । विद्यार्थीकालदेखि नै माओवादीनिकट मानिएका अधिकारी भोटाहिटीमा कम्प्युटर इन्स्टिच्युट चलाउँदा अधिकारीको इन्स्टिच्युटबाट माओवादीका भूमिगत कार्यकर्ताले इमेल, फ्याक्स र फोटोकपिको काम गर्दथे ।
पूर्वमाओवादीका एक स्थायी सदस्यका अनुसार त्यतिबेला अधिकारीले केही रकम, कम्प्युटर र मोबाइल पनि उपलब्ध गराउँथे । ती नेता भन्छन्, ‘भोटाहिटीमा पसल चलाउँदै आएका अधिकारीको खासखास नेतासँग सम्बन्ध भइसकेको थियो तर प्रचण्डसँगको घनिष्ठता भने शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै भएको हो ।’
माओवादीसँगको त्यही सम्बन्धले सरकारी निकायको निगरानीमा परेका अधिकारीले २०५९ पछि भोटाहिटीको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट छोडेका हुन् । नुवाकोटका एक माओवादी नेताको भनाइमा काठमाडौंका केही व्यापारी र ठेकेदारसँग चन्दा उठाउने जिम्मा पनि थियो ।
उनीमाथि चन्दा उठाएर हिनामिना गरेको आरोप त लाग्यो नै, त्यसबाहेक ठेकेदारसँगको संगत पनि बढ्यो जसले अधिकारीलाई ठेक्का लिन सिकायो । त्यसपछि इलाम र झापामा खानेपानीसम्बन्धी पेट्टीठेक्का लिएर अधिकारीले ठेकेदारी कामको थालनी गरेका थिए ।
नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाका अधिकारीको सम्बन्ध माओवादीको उपल्लो तहमा थिएन । तर, शान्ति प्रक्रियाको आरम्भसँगै माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीमार्फत प्रचण्डको डेरासम्म पुगेका अधिकारीले प्रचण्डलाई विश्वास मात्र दिलाएनन, उनकै आडभरोसामा राज्यका प्रशस्त संयन्त्रमा घुस्ने मौकासमेत पाए । प्रचण्डका छोरा प्रकाशसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएका थिए उनले । त्यसैले उनको ठेक्का फस्टाउनुमा पनि प्रकाशकै हात बढ्ता थियो । दिवंगत प्रकाशको व्यक्तिगत जीवनसम्मै त्यस बेला अधिकारीको कनेक्सन जोडिएका प्रसंगहरू निकटस्थहरू सुनाउने गर्छन् ।
ललितपुरको सीडीओ कार्यालयनजिक रहेको अधिकारीको घरमा प्रकाश र पत्नी बिना मगर छ महिनाभन्दा बढ्ता बसेका थिए । उनीहरूका छोरा ४ महिना अधिकारीकै घरमा हुर्किएका हुन् । प्रकाश बिनाको बसाइ ललितपुर हो भनिए पनि कता बस्छन् भन्ने गुपचुप नै राखिएको थियो ।
प्रकाशसँगको यही निकटताको फाइदा उठाउने क्रममा अधिकारीले सडक निर्माण तथा पिचका अर्बौंका ठेक्का लिए । राजनीतिक पहुँचकै कारण ठेक्का अलपत्र पार्दा पनि कारबाहीभन्दा बढ्ता पुरस्कृत नै भए । उनी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सल्लाहकार पनि त्यही पहुँचका आधारमा भएका हुन् ।
अधिकारीका कुनै पनि ठेक्का राजनीतिक शक्तिकै कारण रद्द हुन नसकेको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ । ती सहसचिवको भनाइमा मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम नगर्ने, उल्टै ठेक्काको समय लम्ब्याइरहने प्रवृत्ति बढ्नुुमा मुख्य कारण प्रचण्ड परिवारको भरथेग नै हो ।
संकटको बेला बास दिनेलाई कसरी भुल्न सक्थिन् र बिनाले रु तर उनको व्यक्तिगत जीवनसँग सार्वजनिक पदको स्वार्थ द्वन्द्व हुन पुगेकोमा भने कत्ति पनि हेक्का राखिनन् । खानेपानीमन्त्री बनेको एक वर्षपछि बिना मगरले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी एउटा ठेक्का अधिकारीलाई दिलाइन् । परिणाम जगजाहेर छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि १ अर्ब ४१ करोडको ठेक्का २०७६ साल जेठमा अधिकारीको कम्पनीले पाएको थियो । आफ्नै घरबेटीलाई ठेक्का दिलाएर विवादमा आएकी खानेपानीमन्त्री बिनालाई अधिकारीका अलपत्र आयोजनाबारे जानकार नभएको कहाँ हो र रु तर उनले त्यसतर्फ कुनै चासो नै दिएकी छैनन् ।
त्यति मात्र होइन, छोरा प्रकाशसँगको दोस्तीबाट प्रचण्ड परिवारमा एकाघरजस्तो भएका अधिकारी ललितपुरको घर यस्तो भइदियो, जहाँ पूर्वमाओवादीको एकता मात्र होइन, एमाले र माओवादीकै एकतासम्मका छलफल भए । राजनीतिक पहुँच देखाउन ती दुई सन्दर्भ अधिकारीका लागि पर्याप्त छन् ।
जस्तो, १७ असोज २०७४ मा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन गर्ने सहमतिको थलो मानभवनस्थित अधिकारीको घर नै थियो । त्यही घरमा दुई पार्टीबीच एकतासम्म पुग्ने सहमति भएर भोलिपल्ट सभागृहमा घोषणा गरियो ।
त्योभन्दा पहिला पूर्वमाओवादी घटकहरूको एकता वार्ता पनि त्यही घरमा भएको थियो । रामबहादुर थापा बादल समूह, मणि थापा र मातृका यादव समूहबीचको एकता वार्ता त्यहीँ टुंगो लागेर कार्की पार्टी प्यालेसमा घोषणा गर्न पुगेका हुन् । मणि थापा भन्छन्, ुएकताका लागि एकपटक अधिकारीको घरमा छलफल भएको हो ।ु
अधिकारीको त्यो घर इतिहासका एक नामुद पात्र नर शमशेरको हो । अधिकारीले साढे २ रोपनीको यो घर सिद्धार्थ बैंकबाट लिलामी सकारेका हुन् । यति कुरा थाहा पाउने जोकोहीले बुझ्न सक्छ, अधिकारीमाथि किन कारबाही हुन सक्दैन रु
यस पल्ट भने भुषालले कारबाही थालेका छन् । उनी आफ्ना अडानमा उभिइरहन सक्छन् या सक्दैनन् भन्नेमा आमजिज्ञासा छ । केही महिनाअघि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीको जवाफ दिने क्रममा उनले आफू चक्रब्यूहमा परेको स्वीकारेका थिए । तर उनले यो पनि भनेका थिए, ‘माननीय गिरिजी, म अभिमन्यु होइन, जयद्रथ बनेर निक्लनेछु ।’
जुन हिम्मत गृहमन्त्री थापाले गर्न सकेनन्, भुषालले गरेका छन् । के भुषाल यो पल्ट जयद्रथ बन्लान् रु या अभिमन्यु नै बनेर असफल होलान् रु यस अर्थमा भुषालका लागि पनि परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।
(*शीर्षक परिवर्तन गरिएको)